'GRAMMYs' ပွဲကြီးမှာ ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ Kpop အဆိုတော် ဖြစ်လာသည့် B.I.
‘GRAMMYs’ ပွဲကြီးမှာ ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ Kpop အဆိုတော် ဖြစ်လာသည့် B.I.
‘GRAMMYs Global Spin’ ဆိုတဲ့ concert ပွဲကြီးဟာ global music ကို promote လုပ်ဖို့အတွက် ဂရမ်မီကနေ ကြီးမှူးစီစဉ်တဲ့ပွဲကြီးပါ။ မနှစ်ကတော့ ဂရမ်မီ ဟာ ကမ္ဘာအနှံ့က သီချင်းတွေကို ပျံ့နှံံ့စေဖို့အတွက် project အမျိုးမျိုးနဲ့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ‘Best World Music Album’ ဆိုတဲ့ဆုလိုမျိုးကို ‘Best Global Music Album’ ဆု ဆိုပြီး နာမည်ချိန်းခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်က The ‘GRAMMYs Global Spin’ ပွဲကြီးကို 2020 ခုနှစ် September လမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး music industry ထဲက လူမျိုးမတူတဲ့ အနုပညာရှင်မျိုးစုံကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အတူတူဖျော်ဖြေစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Kpop အဆိုတော် B.I. ကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း ဒီနေ့ December 29 ရက်နေ့မှာ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပွဲကြီးမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံး Kpop အဆိုတော်အဖြစ် B.I. ဟာ သမိုင်းရေးထိုးနိုင်တော့မှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး… ဒီပွဲမှာဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး Asian အနုပညာရှင်အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ပါသေးတယ်။ ဒီပွဲကို လာမဲ့ January လ4ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး GRAMMY ရဲ့ official homepage နဲ့ social media တွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ အချိန်ကတော့ နေ့လည် တစ်နာရီ (EST) ကနေ စတင်ဖျော်ဖြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next “Snow Drop” ဆက်မလွှင့်ဖို့ K Netizen တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို အိမ်ပြာတော်မှ ပယ်ချ (သတင်းအပြည့်အစုံ) »
Previous « 'Kingdom' စာ​ရေးဆရာမရဲ့ drama အသစ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ​အလားအလာရှိနေတဲ့ Gong Yoo နဲ့ Kim Tae Ri
IU နဲ့ Lee Ji Eun (နာမည်ရင်း) ကြားက ကွာခြားချက်အကြီးကြီးကို မီးမောင်းထိုးပြောပြခဲ့သူ IU
နာမည်ကြီးလူကြိုက်များမှု​ကြောင့် အပိုင်းသစ် တိုးချဲ့ပြသသွားမယ့် ‘The Red Sleeve’ Drama